I-nonlinear crystals Factory - i-china nonlinear amakristalu abakhiqizi, abahlinzeki
Izindlela zokukhulisa kufaka phakathi okuvundlile nokuqondile, lezi zinto (ZnGeP2, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, KTA, KTP, BIBO, LBO, BBO) ziyatholakala ngobukhulu obujwayelekile nokunikezwa. Ezinye zazo, ezinezici zokulingana okungalingani komugqa nobukhulu obuyingqayizivele esizihlinzekile zisetshenziswa kakhulu kuma-SHG ajwayelekile, i-THG ne-Mid-infrared OPO, izinhlelo ze-OPA, njll. Imikhiqizo ingalethwa noma ngaphandle kwesiphathi se-Anodized Aluminium.
I-Gallium phosphide (GaP) crystal iyinto ebonakalayo ye-infrared enobulukhuni obuhle bendawo, ukuqhuba okuphezulu okushisayo nokudluliswa kwebhendi okubanzi.
I-Zinc Telluride iyinhlanganisela yamakhemikhali kanambambili nefomula iZnTe.
Cr2 +: ZnSe
I-Cr² +: I-ZnSe satable absorbers (SA) ziyizinto ezifanelekile ze-passive Q-switch ye-fiber ephephe iso kanye ne-lasers state eqinile esebenza ku-spectral range ka-1.5-2.1 μm.
Amakristalu e-ZGP aphethe ama-coefficients amakhulu angenawo umugqa (d36 = 75pm / V), ububanzi bebala elibanzi le-infrared (0.75-12μm), ukuqhutshwa okuphezulu kwe-thermal (0.35W / (cm · K)), umkhawulo wokulimala we-laser (2-5J / cm2) kanye imishini esebenza kahle, i-ZnGeP2 crystal yabizwa ngenkosi yamakristalu we-infrared nonlinear optical futhi iseyiyona nto yokuguqula imvamisa engcono kakhulu yamandla amakhulu, isizukulwane se-laser seso infrared. Singanikela ngekhwalithi ephezulu ye-optical nobubanzi obukhulu be-ZGP crystals nge-coefficient ephansi kakhulu yokumunca α <0.05 cm-1 (kumaphampu we-wavelengths 2.0-2.1 µm), angasetshenziswa ukukhiqiza i-laser engaphakathi kwe-infrared tunable esebenza kahle nge-OPO noma i-OPA izinqubo.
AGS isobala kusuka ku-0.50 kuye ku-13.2 µm. Yize i-coefficient yayo ye-nonlinear optical ingaphansi kunawo wonke phakathi kwamakristalu we-infrared akhulunyiwe, ukukhanya okuphezulu kwe-wavelength edala ku-550 nm kuyasetshenziswa kuma-OPO akhishwe yi-Nd: YAG laser; ekuhlolweni kokuvama kokuvama okuningi nge-diode, Ti: Sapphire, Nd: YAG kanye ne-IR dae lasers ehlanganisa u-3-12 µm ububanzi; ezinhlelweni zokuphikisa ezisebenza ngqo ze-infrared, naku-SHG ye-CO2 laser. Amapuleti e-crystal a-Thin AgGaS2 (AGS) athandwa kakhulu ekukhiqizweni kwe-ultrashort pulse maphakathi no-IR range ngomehluko wemvamisa yokukhiqiza esebenzisa ukuqhuma kwamaza we-NIR.
AGSe Amakristalu we-AgGaSe2 anemiphetho yebhendi ku-0.73 naku-18 µm. Ububanzi bayo bokudlulisa obusebenzisekayo (0.9-16 µm) nobubanzi bokwazi ukumataniswa kwesigaba kunikeza amandla amahle kakhulu ezicelo ze-OPO lapho zimpompwa ngama-lasers ahlukahlukene. Ukushuna ngaphakathi kuka-2.5-12 µm kutholakele lapho kudonswa nguHo: YLF laser ku-2.05 µm; kanye nokusebenza kwesigaba esingacacisi (NCPM) ngaphakathi kuka-1.9-5.5 µm lapho ushaya ngo-1.4-1.55 µm. I-AgGaSe2 (AgGaSe2) ikhonjisiwe njengekristalu ephindaphindekayo ephindwe kabili yemisebe ye-infrared CO2 lasers.
Ikheli:Cha. 888, Middle Taodu Ave. Isifunda saseLongquanyi, eChengdu, PRChina.